Cristiano Ronaldo oo isu bandhigay Kooxda Barcelona ka hor inta uusan u soo dhaqaaqin Manchester United – Gool FM
Cristiano Ronaldo oo isu bandhigay Kooxda Barcelona ka hor inta uusan u soo dhaqaaqin Manchester United
Haaruun September 1, 2021
(Manchester) 01 Sebt 2021. Cristiano Ronaldo ayaa la soo warinayaa inuu isu bandhigay Kooxda Barcelona oo uu doonayay inuu ku biiro ka hor inta uusan u soo dhaqaaqin Manchester United.
Sida wararku ay tilmaamayaan Weeraryahanka Cristiano Ronaldo ayaa horay isugu bandhigay Kooxda Barcelona ka hor intii uusan dib ugu soo laaban kooxdiisii hore ee Manchester United.
Red Devils ayaa xaqiijisay saxiixa Ronaldo Talaadadii, xiddiga xulka qaranka Portugal ayaana dib ugu soo laaban doona garoonka Old Trafford kaddib 12 sanadood oo uu ka maqnaa.
Ronaldo ayaa heshiis labo sanadood ah u saxiixay Man United, waxaana heshiiska qeyb ka ah in lagu kordhin karo 12 bilood oo dheeri ah haddii loo baahdo.
36-sano jirkaan ayaa suuqii xagaaga oo dhan la warinayay inuu isaga tagi doono Kooxda Juventus, waxaana la la xiriirinayey inuu dib ugu laaban doono kooxdiisii hore ee Real Madrid.
Dhinaca kale Ronaldo ayaa ku dhowaaday inuu ku biiro Manchester City todobaadkii la soo dhaafay, laakiin Man Utd ayay kaliya ku qaadatay saacado si ay saxiixiisa ugu garaacaan kooxda ay ku xafiiltamaan Magaalada Manchester.
Sida uu haatan warinayo Warsidaha Diario Sport, xiddiga shanta goor ku guuleystay abaal-marinta Ballon d’Or xitaa waxa uu isku bandhigay oo uu doonayey inuu ku biiro Kooxda Barcelona.
Si kastaba ha noqotee, kooxda ka dheesha horyaalka La Liga ayaa la sheegay inay durbadiiba iska diiday fursad ay kula saxiixan lahayd Weeraryahankii hore ee Real Madrid.
Go’aankooda ayaa laga yaabaa inuu ku salaysnaa xaaladda dhaqaale xumo ee Barcelona, balse waa ay rabi lahayd Barca inay la saxiixato xiddigii hore ee Real Madrid oo ay ku coltamaan Spain.
Yeelkeede, waxa uu ugu dambeyn ka mid noqday Kooxda Man United, Weeraryahankan CR7 ayaana la filayaa inuu kulankiisii ugu horreeyey Man Utd u ciyaaro 11 bisha September kaddib marka laga soo laabto ciyaaraha caalamiga ah ee qarammada.
RASMI: Kooxda Manchester City oo heshiis cusub ka saxiixatay Goolhayeheeda Ederson
Cristiano Ronaldo oo dhaafay Ali Daei kaddib guushii uu xalay ku hoggaamiyey xulkiisa Portugal, rikoor cusubna u dhigay Adduunka